Mankany amin'ny dobo izahay miaraka amin'ny Sonos Roam, namana tsara indrindra amin'ny andro fahavaratra [Analysis] | Vaovao Gadget
Karim Hmeidan | 21/06/2022 21:09 | Nohavaozina amin'ny 21/06/2022 21:12 | miteny
Na dia manomboka amin'ny fomba ofisialy amin'ity herinandro ity aza, dia efa maro amintsika no mijaly noho ny hafanan'ny fahavaratra, ary mbola ho mafana kokoa ny fahavaratra. Inona àry no tsara kokoa noho ny milomano ao anaty dobo? ary eny, efa fantatray fa geeks daholo ianareo ka anio dia mitondra ny analyse ny Nuevo Sonos mandehandeha, ilay mpandahateny tsara indrindra ho an'ny tolakandron'ny dobonay (maraina sy alina). Mpandahateny manana kalitao tsara mahatohitra ny zava-drehetra (na saika). Tohizo ny famakiana fa ambaranay aminao ny antsipiriany rehetra.
1 Eny, natsobokay izany
2 Design mety amin'ny surface rehetra, sy ny orinasa…
3 Loko vaovao avy any Kalifornia
Eny, natsobokay izany
Alohan'ny Sonos Roam mahazatra, tsara ilay manana mpanampy virtoaly (misy version SL mora kokoa raha tsy misy ny wizard), izany no izy mifanaraka amin'ny Alexa sy ny Google Assistant. Avy eo dia hiresaka momba ny loko vaovao isika, fa ny zava-dehibe indrindra dia ny manazava fa eny, azonao atao anaty rano izany ary ny Sonos Roam dia mbola hiasa toy ny ody.
Eny, rehefa rendrika dia mijanona tsy mamoaka feo angamba noho ny onjam-peo bluetooth satria very ny signal. Ankoatr'izay, mazava ho azy fa maro aminareo no hieritreritra ny fomba hampahomby azy io rehefa tsy misy famantarana Wi-Fi? Eny, araka ny voalazanay… Sonos Roam dia afaka mifandray amin'ny fitaovantsika amin'ny alàlan'ny Bluetooth ankoatry ny Wi-Fi, mba hahafahantsika mampifandray ny finday avo lenta rehetra na akaiky ny Wi-Fi ao an-tranontsika na tsia. koa crehefa mandeha any ambanivohitra na eny amoron-dranomasina... (Tsarovy fa amin'ny fanamafisana voalohany dia mila fifandraisana Wi-Fi foana ianao)
Raha ny fizakan-tena. manana ny sasany 10 ora famerenan'ny Bluetooth amin'ny feo mahazatra, ao an-trano miaraka amin'ny Wifi dia manana fizakan-tena mitovy amin'izany koa, ary avy eo dia azonao atao ny mampiditra azy amin'ny plug na bateria ivelany noho ny azy. Seranan-tsambo USB-C. Ary teny an-dalana, dia mifanaraka amin'ny Qi charging pads ihany koa.
Design mety amin'ny surface rehetra, sy ny orinasa…
Hitanao amin'ny sary teo aloha izany, napetratsika teo ambony tsihy izy teo am-pisakafoanana tamin'ny fahavaratra, tsy hisy na inona na inona hitranga raha mando amin'ireo isika na mianjera any amin'ny fanambanin'ny dobo….
Tena tianay izany ao amin`ny tapany ambany marindrano ny famolavolana dia vita amin`ny fingotra mba tsy solafaka, ny endrika mitovy amin'ny hoe nametraka azy mitsangana. Mazava ho azy, mitandrema fa ny ampahany hafa dia vita amin'ny metaly ary mino izany izahay mora kikisana izy ireo ary mety ho hita ireo ratra ireo. Zavatra tsy dia tianay loatra satria na dia miezaka manaraka ny kalitaon'ny famolavolana Sonos aza dia mety ho simba mora foana izy io satria mpandahateny azo entina.
Eo an-tampony dia manana ny fanaraha-maso playback ary koa ny fanaraha-maso mikrô izay azontsika ampangina amin'ny fotoana rehetra tiantsika (izany koa dia miasa toy ny mikrôfo ho an'ny fanamafisam-peo Trueplay avy amin'ny Sonos).
Loko vaovao avy any Kalifornia
Ity Sonos Roam ity dia tonga amin'ny fotoana tsara indrindra hankafizantsika azy amin'ny fialan-tsasatra. Loko vaovao aingam-panahy avy any Kalifornia manomboka amin'ny a maitso oliva (ny dikan-teny nandramantsika) izay mampahatsiahy antsika ny saha Kalifornia, ny loko Onja (manga) ny ranomasina Pasifikahandalo azy filentehan'ny masoandro, ny filentehan'ny masoandro mena amin'ny filentehan'ny masoandro any Kalifornia.
Loko vaovao miaraka amin'ny mainty sy fotsy izay natolotr'izy ireo teo aloha ary efa ananantsika mba ho azontsika alohan'ny handehanantsika eny amoron-dranomasina.
Ny marina dia afaka manampy kely amin'ny vokatra Sonos isika, miasa izy ary manao toy ny ody. Na dia marina aza fa misy fanatsarana ny zava-drehetra, ny Sonos Roam no namana tonga lafatra amin'ny andro dobo. Tsy manahy intsony ny amin'ilay namana izay manipy ny tenany ao anaty "baomba" mandositra ny zava-drehetra, tsy hijaly ny Sonos Roam.
Marina fa misy vidiny ny zavatra rehetra, 199 euros dia afaka manome lanja maro safidy hafa, fa ny mety ho manana mpandahateny Sonos izay azontsika ampiasaina amin'ny rafitra Sonos amin'ny Wifi, ary amin'ny fialana amin'ny teknolojia noho ny Bluetooth dia ataon'izy ireo ho mpandahateny tokony hotadidina.
Ny feo, ny endri-javatra ary ny fanohanana an'i Sonos dia mahatonga an'ity Sonos Roam ity, izay miloko miloko ankehitriny, ho iray amin'ireo mpandahateny azo entina indrindra hodinihina. € 199 ho takalon'ity mpandahateny portable mahafinaritra ity izay azonao jerena ao amin'ny tranokala ofisialy Sonos na amin'ny mpivarotra teknolojia lehibe.
Navoaka tamin'ny: 21 junio 2022
Fanovana farany: 21 junio 2022
Ny kalitaon'ny feo
Fampifandraisana tsy misy tariby miaraka amin'ny zava-drehetra amin'ny alàlan'ny Wi-Fi sy Bluetooth
Fitaovana azo hatsaraina ho SUV
Fahaleovantena tsara kokoa
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » Sary sy feo » miteny » Mankany amin'ny dobo izahay miaraka amin'ny Sonos Roam, namana tsara indrindra amin'ny andro fahavaratra [Analysis]
Carpuride dia mitondra Android Auto sy CarPlay amin'ny fiaranao taloha